PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-11-28 - Ufuna abazali balekelele oth­isha ezikoleni uMqon­disi wezem­fundo
Ufuna abazali balekelele oth­isha ezikoleni uMqon­disi wezem­fundo
Eyethu Baywatch - 2018-11-28 - NEWS - THANDO NDLOVU
UMQON­DISI wezem­fundo es­i­fun­deni se-King Cetshwayo, uMnuz. David Chonco up­hon­sele abazali in­se­lelo yokuba balekelele oth­isha, em­seben­zini wabo woku­fundisa izin­gane. UChonco ubekhu­luma em­cim­bini wokud­luliselwa kwa­mak­i­lasi am­a­bili kwesinye sezikole esin­gaphansi kwen­dawo yeNkosi yak­waMkhwanazi eDlangezwa.
La­mak­i­lasi akhiwe ngo­sizo loMkhandlu we­sizwe sak­waMkhwanazi, es­i­holwa yiNkosi uMandla Mkhwanazi.
UChonco ukushayele ihlombe ukun­genelela komkhandlu we­sizwe eku­fuku­leni ezem­fundo ku­len­dawo.
‘Siyabun­coma ubuholi bomd­abu ku­len­dawo ngokusukumela phezulu, uma aba­fundi se­be­phuma esan­dleni noma ku­naziphi izinkinga ezikoleni za­ku­len­dawo. Uphinde wakhum­buza abazali ukuthi akusi­wona kuphela um­sebenzi woth­isha, ukuqinisek­isa isiko loku­funda noku­fundisa ezikoleni, kodwa nabo kumele ban­genelele ngomkhono ne­siphanga.
‘Son­de­lani eduze kwezin­gane zenu, bese nix­humana noth­isha ukuze be­zohlale besaba aba­fundi ukuthi bazobonakala uma ben­genzi kahle.
‘Ku­lonyaka nokho kung­cono ngoba, akekho um­fundi ob­hala izivivinyo eboshiwe, ngaphan­dle kwabase­jele njen­goba siye sibe ne­m­izamo yokuthi siqinisekise ukuthi bayab­hala.
‘UChonco ubuye wakug­cizelela ukuthi aba­ham­bisani nomkhuba woku­lahlwa kwamapeni, okuy­into eye­n­ziwa ngaba­fundi baka­matikulet­sheni uma se­be­qede ukub­hala.
‘Njen­goMnyango Wezem­fundo asin­gene ekuh­lel­weni kwemicimbi yoku­lahlwa kwamapeni.
Siyanxusa nabazali ukuba bangazivumeli izin­gane zabo uk­wenza lemicimbi en­gekho em­theth­weni, ngoba isiphetho sayo wu­sizi nezinyem­bezi. Calls for par­ents to in­volve them­selves in chil­drens ed­u­ca­tion